Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပြင်သစ်ဘောလုံးကစားသမား Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB တစ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Genius အကောင်းဆုံးလူသိများ as- ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက် လက်ဝဲ-Back ၏ Kylian Mbappe။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။
Ferland Mendy ကလေးဘဝ Story- အဆိုပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ, မိသားစုနောက်ခံ, ကျော်ကြားမှုမတိုင်မီဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝင်ပတ်သက်, ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ကြားဆက်ဆံရေး, လူနေမှုပုံစံစတဲ့ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝစသည်တို့မှထမြောက်
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုသူ 2018-2019 ရာသီအတွက်ကမ္ဘာအတွက်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လက်ဝဲ-Back တစ်ဦးကသူ့ကိုတစ်ရီးရဲလ်ရဲ့ဝယ်ယူမှုရရှိခဲ့သည့်လုပ်ရပ်ခဲ့သိတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Ferland Mendy ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
Ferland Mendy မြောက်ဘက်-အလယ်ပိုင်းပြင်သစ်, Meulan-my-Yvelines ၏ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အာဖရိကမိဘများထံသို့ဇွန်လ 8 ၏ 1995th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မိမိအမွေးရပ်မြေ၏ဆင်တူသည် Abdoulaye Doucoure, သူ့သူချင်းပြင်သစ်နိုင်ငံတကာနှင့် မ ၏ ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Mendy သူအများအပြားပရိတ်သတ်တွေယူဆသူ့အစ်ကိုသို့မဟုတ်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Ferland တစ်ဦးကျိုးနွံမိသားစုသို့မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိမိအရူပထံမှတရားစီရငျ, သငျသညျသူ့မိဘစကားမှန်ရဲ့အာဖရိက origin- ၏ဖြစ်ကြောင်းအလွယ်တကူခန့်မှန်းနိုင်ဘူး။
အစီရင်ခံစာ၏အဆိုအရ Ferland Mendy ရဲ့မိခင်ဂီနီ (အနောက်အာဖရိက) မှသူမ၏ဇာစ်မြစ်ရှိပြီးသူ့ဖခင်ဆီနီဂေါ (အနောက်အာဖရိက) မှသူ၏မူလအစရှိပါတယ်နေစဉ်။ ဒါဟာ Ferland Mendy ရဲ့မိဘများ, ယခင်ကပြင်သစ်တွင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့တစ်ချိန်ကအာဖရိက၌မိမိတို့နိုင်ငံများကထွက်ခွာသွားတဲ့သူရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတို့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း, ချစ်ခြင်းအတွက်လဲသူ့ကိုမွေးဖွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။
နောက်ထပ်အတည်မပြုရသေးတဲ့သူကသူ့ကိုခဲမဆို Moni ရှိခြင်း, မိမိကိုယ်ကိုအားဖြင့်အားလုံးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူကသူ့မိခင်နှင့်ဆင်းရဲသားထွက်ခွာကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်စဉ် Ferland Mendy ကသူ့အဖေကိုဆုံးရှုံးကြောင်းတည်ရှိ။
Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
Ferland ခက်ခဲတဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ သူကအသက်ငယ်စဉ်အခါမျှကစားစရာသို့မဟုတ်ကစားနည်းများ, ယ့်ဘောလုံးကွင်းသို့မဟုတ်သူတစ်ဦးဘောလုံးဘောလုံးကိုများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်သို့အသွင်ပြောင်းနိုင်ဘာမှရှိခဲ့သည်။ ဘောလုံးညာဘက်ခြေတော်ရင်း၌ရှိစဉ်အခါကပိုဒါအနတ္တကိုယ်တော်၌အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ပထမတော့ Mendy အလွန်အကျွံဘောလုံးကြောင့်မိမိအ mum, နေဖြင့်ရပ်နားထားရဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာသူမကနောက်ပိုင်းတွင်ဘောလုံးကစားခြင်းသူမ၏သားရဲ့ကံကြမ္မာကိုခဲ့သဘောပေါက်လာတယ်။ တောင်မှ Ferland Mendy ရဲ့ဝမ်းကွဲမာ့ခ် Gomis တစ်ချိန်က Mendy တက်ကြီးထွားလာကဲ့သို့ဖြစ်၏ဘယ်လိုရှင်းပြသည်။ သူ၏စကားခုနှစ်တွင်;
"သူကအမြဲသူ့ကိုအတွင်း၌ဘောလုံးကွင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကငယ်, ဒါပေမဲ့အမြဲခက်ခဲတဲ့ခဲ့ပေမယ့်။ "
မိမိအအလုပ်အကိုင်အဖြစ်ဘောလုံးယူမီကသူ၏ငယ်ဘဝမိတျဆှေ Mangane Yaya တစ်ချိန်က "Mendy အော်ဖို့အသုံးပြုကြောင်းပြန်ပြောပြအမြန်နှုန်း, speed"ကလေးငယ်များအတွက်အဖြစ်ကစားနေစဉ်သူဝေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထဲကပြေးအဖြစ်။
ကလေးတစ်ဦးကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသော Ferland Mendy တဲ့ professional ဘောလုံးသမားဖြစ်လာရန်ခဲ့ချင်တယ်။ သူကနောက်ကျောထို့နောက်သူ့ကိုသိတယ်သူမည်သူမဆိုသူ့မျက်စိထဲမှာမြင်နိုင်အောင်အများကြီးပြဌာန်းခွင့်နှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့သောပြဌာန်းခွင့်သူ့ကိုစမ်းသပ်မှုတွေအဘို့ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ကိုမြင်တော်မူ၏။
Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
ဘောလုံးအဘို့အ Mendy ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကသူ့ကိုစမ်းသပ်မှုတွေဖြတ်သန်းနှင့်သူ့ကိုသူ၏အခွက်တဆယ်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခြေခံအုတ်မြစ်တခုအဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူဒေသခံကလပ်, Ecquevilly EFC မှာစာရင်းသွင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ မိမိအမြန်နှုန်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည် Ferland တစ်ဦးတိုက်စစ်မှူးအဖြစ်ထွက်တော့တာပဲ။ သူသည်ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းဆွဲဆောင်သောလုပ်ရပ်ကလပ်နှင့်အတူတစ်ဦးအထင်အမြင်အောင်အမြန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ်9အတွက် 2004 ၏အသက်အရွယ်မှာ Ferland Mendy တစ်ဦးပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းအကယ်ဒမီကလက်ခံတယ်။ ကလပ်မှာနေစဉ်ကသူ၏နည်းပြတစ်ဦးဘယ်ဖက်နောက်ကျောသို့သူ့ကိုအသွင်ပြောင်း။ တောင်မှပြန်မယ့်လက်ဝဲဘက်အဖြစ်, Ferland တူသောဖန်စီကစားသမားမ အက်ရှလေကိုးလ်ဖိလိပ်ပု Lahm, ရောဘတ်တိုကားလို့စ် နှင့် Paolo Maldini ။ သူလုပ်ခဲ့တယ်အားလုံးသည်ကြီးစွာသောထက်မကအခြားကသူ့ hero- အတုယူဖို့ဖြစ်တယ် နယ်.
Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame ပုံပြင်ရန်ခက်ခဲလမ်း
စီစဉ်ထားတဲ့ PSG အသင်းအကယ်ဒမီမှာ Ferland ရဲ့နေထိုင်ကောင်းစွာမသွားခဲ့ပါဘူး။ ရုံနှစ်အနည်းငယ်ပဲရစ်မျဉ်းကိုချ, ဆင်းရဲသောသူကိုလူကလေးတင်ပါးဆုံရိုးအဆစ်ထဲသို့ဖွံ့ဖြိုးသောတင်ပါးဒဏ်ရာခံစားခဲ့ရသည်။ Ferland ကသူ့တင်ပါးဆုံရိုးအဆစ်, ခြုံငုံအားနည်းခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့အပြည့်အဝရပ်တန့်ရန်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆောင်ခဲ့သောတစ်ခွအေနအေ၏ရောင်ရမ်းခြင်းကနေသေခံတော်မူ၏။
Ferland တစ်နှစ်ကွာဘောလုံးကွင်းထဲကနေခဲ့ရသည်။ ပထမသုံးလအတွင်းသူတစ်ဦးတင်ပါးဆုံရိုး spica အခြား3လအတွင်းအချို့နာကျင်ကုသမှုခံယူနေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ချပစ်ဝတ်ဆင်။ သူကြောင့်တင်ပါးဆုံရိုးဝေဒနာမှမသွားမလာနိုင်တော့သောကြောင့်, ဆင်းရဲသားကို Ferland6လလောက်ကြာမြင့်တဲ့ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ကိုသုံးပြီးစတင်ခဲ့သည်။
Ferland Mendy ဘီးသဘာပတိ Story- ခရက်ဒစ်မှ CL နှင့် BR
မင်းသိလား?… Ferland အဆိုပါ Necker ဆေးရုံမှာနေတုန်းကသူ့ဆရာဝန်ကသူကြောင့်မိမိအပြဿနာများမှတဖန်ဘောလုံးကစားဘယ်တော့မှမယ်လို့သူ့ကိုကပြောကြားခဲ့သည်။ ဤသတင်း Breaking သူ့မိသားစု, အနီးကပ်မိတ်ဆွေများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများကသူ့ကိုအဘို့ဤမျှလောက်နာကျင်မှုစေ၏။
ဆေးရုံထွက်ခွာပြီးနောက်, ဆင်းရဲသားကို Ferland Mendy bullion, အ Yvelines ဌာန, မြောက်ဘက်-အလယ်ပိုင်းပြင်သစ်တွင်ဆက်သွယ်ရေးမှာရှည်လျားပြီးနာကျင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးခံယူ။ ပထမဦးစွာသူပျောက်ကြွက်သားသေံကျောတည်ဆောက်ခြင်းမပြုမီလမ်းပြန်လျှောက်ဖို့ဘယ်လိုသင်ယူခဲ့တယ်။
Recovery ကိုမှ Ferland Mendy လမ်း။ IG မှအကြွေး
rehab အပေါ်နေစဉ်, Ferland Mendy "mind- အတွက်တဦးတည်းအရာထားရှိမည်မိမိအဆရာဝန်မှားသက်သေပြနိုင်ရန်အလိုဆန္ဒ,"
Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame ပုံပြင်မှထလော့
rehab လပြီးနောက် Mendy နောက်ဆုံးမှာဘောလုံးကစားရန်ပြန်လာခဲ့သည်။ သူ Mantois 78, ပြင်သစ်ရဲ့မြို့တော်၏မြို့ဆင်ခြေဖုံးအပေါ်အခြေခံပြီးကလပ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ကလပ်မှာ Mendy သူတစ်ဦးပြည့်စုံနာလန်ထူခဲ့ပေမယ့်သူသည်မိမိအဒဏ်ရာရှေ့၌ထက်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့ဖူးသာပြသသည်။
Ferland Mendy Fame Story- အဆိုပါ Big Recovery ကိုမှထလော့
Mantois 78 အဘို့ကစားနေစဉ်, Mendy ဇွန်လ 2013 အတွက်သူ့ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသူသည် Le Havre ကသတိထားမိတယ်။ ကလပ်အဘို့အလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကသူ၏ယာဉ်တခုအဖြစ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လာမှပိုကောင်းတဲ့ပလက်ဖောင်းကိုမြင်လျှင်သူဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ခြေလှမ်းတက်ခဲ့သည်။
သည် Le Havre မှာမိမိပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်နေစဉ်, Ferland Mendy ရဲ့တိုးတက်မှုထိပ်တန်းပြင်သစ်ကလပ်အားဖြင့်သတိမပြုမိမသွားခဲ့ပါဘူး။ သူကဇွန်လ 2017 ့ငါးသန်းယူရိုများအတွက်ငါးနှစ်စာချုပ်အပေါ်သူ့ကိုထရိုက်ယူခဲ့သည်သူကို Olympique လိုင်ယွန်တို့ကလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကလပ်မှာ Ferland ချက်ချင်းအားကစားခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အောင်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူကဥရောပအကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်စိတ်လက်ဝဲ-ကျောတစ်ကျြမှောကျခတျေ Full-ပြန်၏စတိုင်လ်သို့အလွန်ကိုက်ညီသောသူတဦးတည်း၏တဦးတည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဗီဒီယိုကသက်သေအထောက်အထားတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်မှ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်.
အဖြစ်အစွမ်းထက်, အမြန်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်တက်ဗုံးကြဲနိုင်စွမ်းရှိခြင်း, အပေါ်ကဗီဒီယိုမှာလေ့လာတွေ့ရှိနှင့်ခြမ်းကိုဆင်း Ferland Mendy ဥရောပတိုက်တွင်အပူဆုံးဂုဏ်သတ္တိများ၏တဦးတည်းကိုဖန်ဆင်းပြန်ကမ္ဘာပေါ်မှာကျန်ရစ်အာဏာအရှိဆုံးအကြား။
Ferland Mendy Fame ပုံပြင်မှထလော့။ ခရက်ဒစ်မှ ရည်မှန်းချက်
စာအရေးအသား၏အချိန်မှာ Ferland လက်ရှိ 102 ပြီးပါက၏စံချိန်ရရှိထားသူအဖြစ်လီဂူး 1 & ထိပ်တန်း5ဥရောပလိခ်အခြားနောက်ခံလူထက်ပိုသည်, မိမိနှစ်ခုအိုလံပစ်လိုင်ယွန်ရာသီအတွက် dribbles ။
Ferland သည်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ရဲ့သူဌေးမှဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲယဉ်းအလုပ်တွေအများကြီး၏ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးခဲ့သည် ဇီဒန်း သူ့ကိုလေးလည်းသူ့ကိုပြန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los galactico စီမံကိန်းကိုတည်ဆောက်ကြမည်သောကစားသမားများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာအောင်။ အဆိုပါအရာကြွင်းလေဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေပြောချင်အဖြစ်ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - relationship ဘဝ
Real Madrid အသင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက်ကတည်းကဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေ Ferland Mendy ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာဘဝအကြောင်းကိုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များစေရန်စတင်ပါပြီ။ စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်လူတိုင်း၏နှုတ်ခမ်းပေါ်မေးခွန်းများကိုခဲ့; "Ferland Mendy ရဲ့ Girlfriend သို့မဟုတ်ဇနီးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူနည်း", "Rodri တစ်ဦး Girlfriend ရှိပါသလား?" OR "Ferland Mendy လက်ထပ်လား?"
Ferland Mendy ဆက်ဆံရေးဘဝက။ PESFaces မှအကြွေး
အထင်ကြီးလေးစားဘို့မရှိ, coupled Ferland ရဲ့မှောင်မိုက်-ချောမောရူပသူ့ရည်းစားနှင့်ဇနီးဖြစ်ကိုချစ်မညျ့သူအမျိုးသမီးတစ်ဦး Darling စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်စေခြင်းငှါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုငြင်းပယ်ရှိသေး၏။
သို့သော်စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်, Ferland များအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုဝှကျထားအချစ်ဇာတ်လမ်းရှိနေပါသည်။ ဒါဟာသူ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာအလွန်ပုဂ္ဂလိကနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဒရာမာ-အခမဲ့ရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အများပြည်သူမျက်စိများ၏စိစစ်လှတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းပါပဲ။ Ferland ဇနီးတစ်သို့မဟုတ်ရည်းစားရှိပါတယ်လျှင်ငါတို့သိခင်ကအချိန်တစ်ခုသာကိစ္စပါပဲ။
Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Ferland Mendy ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုသိရန်ရယူခြင်းသငျသညျအထံတော်၌ပြည့်စုံရုပ်ပုံ get ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
Ferland Mendy ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ။ လိမ္မော်ရောင်အားကစားကိုဂုဏ်ပြုသည်
Fame ပုံပြင်အားမိမိလမ်းမကြီးကနေတရားစီရငျ, သင် Ferland အောင်မြင်ဖို့ရန်ဤပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ "ဒါဟာငါ့အကျင့်စာရိတ္တအတွက်ပါပဲ။ အစဉ်မပြတ်ငါကြောင်းကြိုက်ခဲ့သည်"အဘယ်သူ၏အခွက်တဆယ်နှင့်အလိုဆန္ဒအောင်မြင်ဖို့လယ်ပြင်တွင်, မဟုတ်မီးဖိုချောင်တွင်သာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည် Ferland ကဆိုသည်။
"Ferland မကောင်းတဲ့ထမင်းချက်သည်,"သူ၏ဝမ်းကွဲ, မာ့ခ် Gomis ကပြောပါတယ်။ "သူဟာခေါက်ဆွဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကသူ့အခွက်တဆယ်တစ်နေရာတခြားထင်တယ်"Gomis ကဆက်ပြောသည်။
Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - လူနေမှုပုံစံ
(Add-ons တွေကိုများတွင် + 48m ယူရို) 5m ယူရိုဝယ်ယူလျက်ရှိဧကန်အမှန်သမိုင်းထဲမှာစျေးအကြီးဆုံးလက်ဝဲ-ကျောတို့တွင်အ Ferland မန်ဒီပါစေ။ ဤသည်, သို့သော်, တော်တော်အထင်ကြီးကားများ, တော်တော်မိန်းကလေးများနှင့်အရက်များလက်တဆုပ်စာအားဖြင့်အလွယ်တကူသိသာနေတဲ့အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေလူနေမှုပုံစံစတဲ့စဖို့ဘာသာမပါဘူး။ Ferland ပဲမိမိဝမ်းကွဲများနှင့်အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူအရည်အသွေးကောင်းအချိန်ဖြုန်းဖို့ချစ်တော်မူ၏။
Ferland Mendy လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်
အများစုကဘောလုံးကစားသမားဟာသူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုချစ်ပြီး Ferland Mendy တစ်ခုချွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခေတ်သစ်ဂိမ်းထဲမှာမကျန်သစ္စာရှိမှုလည်းမရှိဟုလည်းမရှိတောင်မှယျတျောသညျ, ဧကန်အမှန်အကောင့်သို့ Ferland Mendy နှင့်သူ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လင်းပိုင်အကြားဆက်ဆံရေးကိုယူမထားဘူး။
Ferland Mendy သည်သူ၏ Moni သုံးစွဲဘယ်လို
Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မိသားစုဘဝ
တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ Real Madrid အသင်းလာရောက်ပူးပေါင်းတဦးတည်းရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှင့်မိသားစုဝင်များမှလူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်။ Ferland Mendy ရဲ့မိသားစု၏တောင်မှယျတျောသညျအဖွဲ့ဝင်များကကြပြီ ကျော်ကြားသူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝတွေကိုနေဆဲသတိပညာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
paparazzi နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ပါ၏နှင့်နည်းလမ်းအများအပြားသတင်းအချက်အလက်ပေါ်မှာခက်ခဲ Ferland Mendy ပျောက်အများပြည်သူမျက်စိကနေသူ့မိသားစုတစ်စုလုံးကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဘို့, ဘလော့ဂ်များနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာကနေတဆင့်မှပေါက်ကြားနိုင်ဘူး။ စာအရေးအသား၏အချိန်မှာသူ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်အမည်များ, ဆွေမျိုးသားချင်းများပင်သူ့မိဘအဖြစ်နေဆဲမီဒီယာကနေဝှက်ထားသောနေဆဲဖြစ်သည်။ မိမိအလူမှုမီဒီယာ၏ရေးသားချက်များအနေဖြင့်တရားစီရငျသောကြောင့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အောက်ကအောက်ပါအပေါငျးတို့သညျသူ၏မိသားစုဝင်သို့မဟုတ်ဝမ်းကွဲသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးဖြစ်အံ့သောငှါအများဆုံးဖွယ်ရှိသည်။
Ferland Mendy မိသားစုဘဝ။ IG မှအကြွေး
Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မရေမတွက်အချက်အလက်
Ferland Mendy ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Mendy မှဆက်စပ်ရှိပါသလား?
Ferland နှင့်ဗင်္ယာမိန် Mendy ဆက်ဆံရေး။ ခရက်ဒစ်မှ Sport.net
Ferland လျှင်အတော်များများကပရိတ်သတ်များကိုမေးမြန်းခဲ့ကြ ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Mendy ညီအစ်ကိုချင်းဖြစ်ကြ၏ဒါမှမဟုတ်တချို့လမ်းအတွက် related နေကြသည်။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် pair တစုံအကြားကြောင်းဤမျှလောက်များစွာသောတူညီ, လူတွေပြောနေတာဖန်ဆင်းတော်မူပြီတဲ့အချက်ကိုအချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအတူတူအမည်သစ်ကိုရသော share, နှစ်ဦးစလုံးပြင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း, နှစ်ဦးစလုံးကျောကျန်ကြွင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဆံပင်အဖြူသေဆုံးလျက်ရှိသည်။
ပြင်းထန်သောသုတေသနပြီးနောက်ကျနော်တို့ Ferland နှင့်ဗင်္ယာမိန်နှစ်ဦးစလုံးဆက်စပ်မဆိုလမ်းထဲမှာမဖြစ်ကြောင်းထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှိုင်းယှဉ်၏ဆင်တူသည် Kyle-Walker ကပီတာ နှင့် Kyle Walker က အလားတူအတောင်ပံ play နှင့်အတူတူပင်တိုင်းပြည်များမှနှစ်ဦးစလုံးသူကို။
Ferland သည့်လက်ဟန်ဌာနများတွင်ကောင်းစွာချီးမြှောက်ခဲ့ကြပြီသောသူတို့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်များနှင့်ဆင်တူသည်မိမိလက်ကိုတည်နေရာ၏ Ferland ရဲ့အလေ့အထလေ့လာတွေ့ရှိပါပြီ ဆား Bae။ တူညီတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကြိုးတက်ပြီးသူ့ကို၏တူညီသောဓာတ်ပုံကိုသုံးပြီးသူ့ကိုတစ်ရုပ်ပြောင်စေပြီ။
Ferland Mendy ပျော်စရာအဖြစ်မှန်။ တွစ်တာမှအကြွေး
မင်းသိလား?… Ferland Mendy အစောပိုင်းဘဝသမိုင်းနက္ခတ္တဗေဒဖြစ်တက်ချုပ်ဖော်ပြနေသည်။ 14 မှာဆရာဝန်တွေသူသည်မိမိတင်ပါးဆုံရိုးအတွင်းအဆစ်ခံစားခဲ့ရပြီးနောက်သူလမ်းပြန်လျှောက်ဘယ်တော့မှစခွေငျးငှါသူ့ကိုသို့ပြောသည်။ အခုဆိုရင်အသက်အရွယ် 17 မှအစာရှောင်ခြင်းရှေ့ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်, Ferland ပိုကောင်းလာပြီပြီးနောက် 4th ဌာနခွဲခြမ်း join ဖို့ PSG အသင်းထားခဲ့တယ်။ 20 မှာ, သူက Le Havre မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှည့်။ 22 မှာ, သူလိုင်ယွန်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမိမိနှင့်နာမည်တစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ နှင့်နောက်ဆုံးတော့ 24 မှာသူတစ်ဦး Real Madrid အသင်းကကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဖြစ်ရပ်များရုံ 8 နှစ်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
: ... မှလွဲ. အကောင်းဆုံးလက်ဝဲသို့ပြန်သွားရန်
မင်းသိလား?… အဆိုပါ 2018 / 2019 ရာသီမှာတော့တစ်ဦးတည်းသာ Ferland Mendy ထက် သာ. ကောင်း၏ဟုယူဆခဲ့သညျကျောထားခဲ့တယ်။ မှခွဲပြီး အင်ဒရူး Robertson ကသွားလီဗာပူးလ်အသင်းအနေဖြင့်မရွှေ့မည်သူ, မရရှိနိုင်ကြောင်းအခန်းကဏ္ဍမျှထိုကဲ့သို့သောပါရမီကစားသမားရှိပါတယ်။
မိမိအအကယ်ဒမီ BIG ကြယ်ထုတ်လုပ်:
မင်းသိလား?… ကဲ့သို့သောကစားသမားများထုတ်လုပ်သည့်တဦးတည်း - ပြင်သစ်ဘောလုံးမှာအကောင်းဆုံးလူငယ်အကယ်ဒမီ၏တဦးတည်းမှာက Le Havre ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Mendy, Riyad Mahrez, Lasse Diarrá, ရှင်ပေါလု Pogba, Dimitri Payetစတိဗ် Mandanda, Pierre-Emerick Aubameyang.
Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ဗီဒီယိုကိုအကျဉ်းချုပ်
အောက်တွင်ဒီပရိုဖိုင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ကဗီဒီယိုအနှစ်ချုပ်ကိုရှာဖွေပါ။ ကြင်နာစွာ သွားရောက်ကြည့်ရှု, Subscribe ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန် Youtube ကို Channel ကို နှင့်အသိပေးချက်များအတွက်ဘဲလ်အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Ferland Mendy ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
Real Madrid အသင်းဘောလုံးဒိုင်ယာရီ
Matteo Guendouzi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Florian Thauvin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Alexandre Lacazette ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်